Waa maxay fikradda farshaxanka: qeexidda, astaamaha iyo farshaxanleyda farsamada | Abuurista khadka tooska ah
Fikradda Farshaxanka, Farshaxanka Farshaxanka ama Fikradda Farshaxanka waa isku wax. Waxaa sidoo kale loogu yeeri karaa horumar muuqaal ah waana soo kordheysaa. Horumarinta mashaariicda, gaar ahaan kuwa la xiriira ciyaaraha fiidiyowga, silsiladaha ama filimada xiisaha leh waxaa loo isticmaalaa qiyaas ugu horreyn ah oo ku saabsan "sida ay u eg tahay iyo sida ay dareemeyso" waxa la sawiray.
Laakiin, Waa maxay fikradda farshaxanka? Faa'iidooyin noocee ah ayey leedahay? Sidee u sameysaa Haddii aad la yaaban tahay oo aad rabto inaad jawaab u hesho dhammaan su'aalahan, iyo qaar kaloo dheeri ah, markaa waxaan kaa caawin doonnaa inaad caddeyso fikradahaaga.
1 Waa maxay art art
1.1 Fikradda farshaxanka iyo sawirka
2 Sidee farshaxanka fikradda loo sameeyaa
3 Sida Loo Noqdo Xirfadle Farshaxan Fikrad
3.1 Aqoonta farshaxanka
3.4 Noqo mid geesinimo leh
4 Fikradda fanaaniinta farshaxanka
4.2 Isidoro Valcárcel Madiina
Farshaxanka fekerku waa qayb ka mid ah farshaxanka muuqaalka ah. Waxaa lagu qeexi karaa anshax mas'uul ka ah xalliyaan dhibaatooyinka sheekada iyo bilicsanaanta. Taasna waxay u adeegsaneysaa waxyaabo muuqaal ah. Si kale haddii loo dhigo, waa matalaad muuqaal ah oo ku saabsan fikradaha xagga jilayaasha, dejinta, walxaha, iwm. qof ama koox soo martay.
Waa qiyaastii ugu horreysay ee sida dhammaan walxahaasi u muuqdaan ka dibna "loogu hibeeyo" nolosha iyadoo loo marayo saamaynta muuqaalka.
Fikradda farshaxanka iyo sawirka
Waa inaad maskaxda ku haysaa in fikradda farshaxanka iyo sawirku aysan isku mid ahayn, in kasta oo ta hore ay ka koobnaan karto tan dambe. Guud ahaan, farshaxanka fekerku waa sawir, ha ahaadaan astaamaha, dejimaha, hubka ... Laakiin waxay leedahay shaqo ka duwan sawirka. Iyadoo tan looga dan leeyahay in laga sheekeeyo sheeko, astaamaheeda, qorshaheeda, hareeraheeda; marka laga hadlayo farshaxanka fikradda ah waa uun sawir ka hadlaya sida ay wax u soo noqon karaan, wax intaas ka badanna ma jiraan. Laakiin iyada lafteeda lama isticmaali karo; Waa inaad ka shaqeysaa si aad ugu deeqdo "nuxurka "as.
Si kale haddii loo dhigo, waa qiyaas ugu horreyn ah waxa natiijada ugu dambeysa ay noqon doonto, dariiq ka dhigaysa waxa la arkay la rumeeyo. Taabadalkeed, sawirka aan kahadleyno natiijada dhamaadka oo dhameystiran.
Sidee farshaxanka fikradda loo sameeyaa
Haddii aad isweydiin lahayd dhowr iyo toban sano ka hor, waxaan kuu sheegi lahayn taas, si aad u abuurto farshaxanka fikradda, waxa kaliya ee aad u baahnayd waxay ahaayeen qalin, warqad iyo male weyn. Laakiin hadda, teknoolajiyada cusub, runtu waxay tahay in barnaamijyada tafatirka sawirku ay aad muhiim ugu yihiin fulinta noocaan ah matalaadda farshaxanka.
Walxaha sida 3D, halabuurka, muujinta, Zbrush iyo fikradaha kale Waxaa laga yaabaa inaysan kuugu muuqan sida Shiineys oo kale, laakiin waxay noqon doonaan "cuntada maalinlaha ah" ee shaqadaada.
Intaa waxaa dheer, waa inaad tixgelisaa, farshaxanka farshaxanka, waxaa jira laba walxood oo muhiim ah (dhab ahaantii ka badan, laakiin laba ayaa ah kuwa ugu fiican ee la yaqaan):
Naqshad muuqaal ah. Kuwaani waa meelaha ay ka dhici doonaan xaaladaha muhiimka ah ee shaqada. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in si faahfaahsan loo faahfaahiyo tan ugu yar si loo awoodi karo in loo arko sida goobta oo dhami isugu xidhan tahay iyo shucuurta ay gudbiso. Sababtaas awgeed, farsamooyinka sida aragtida, midabbada, laydhadhka iyo hoosku aad ayey muhiim u yihiin, maaddaama iyaga la leh cunsurro ama qayb ka mid ah «qurxinta» taagan.
Naqshadaynta astaamaha Si aad u abuurto iyaga, waxaad u baahan tahay inaad fahamtid. Kaliya maaha muuqaalka jilayaasha waa muhiim, laakiin sidoo kale gudaha si ay awood ugu yeeshaan inay bannaanka u matalaan sifooyinkaas qeexaya jilayaasha. Ujeeddada? Inay abuuraan naxariis. Si aad awood ugu yeelato inaad si sax ah u abuurto, waxaa aad muhiim u ah in la ogaado anatomy ee astaamahan, iyo sidoo kale muuqaalka wajigooda. Mana ka hadlayno oo keliya aadanaha, laakiin sidoo kale waxaan u jeednaa xoolaha iyo xitaa dhirta.
Farshaxanada fikradaha laftoodu waxay sidoo kale ku talinayaan in naqshadeeyaha uu leeyahay xirfado sheeko gaar ah. Waad noqon kartaa qof sifiican wax u sawira, laakiin hadaadan sawiradaada ka bixin sheeko, qaab aad ku fahmi karto tusaalooyinkaas aad soo bandhigeyso, ama macnaha guud ee naftiisa, waxay luminayaan nolosha waxayna sii ahaanayaan kaliya sawirro kaliya.
Taabadalkeed, farshaxanka fekerku wuxuu abuuraa aasaaska sheekada.
Sida Loo Noqdo Xirfadle Farshaxan Fikrad
Haddii aad tahay naqshadeeye garaaf ah, ama aad jeceshahay inaad wax sawirto, waxaa suurtagal ah in farshaxanka fekerku yahay fikrad soo jiidaneysa dareenkaaga, gaar ahaan maxaa yeelay waxay kuu furaysaa albaabbo badan. Si kastaba ha noqotee, si aad u guuleysato, waxaad u baahan tahay inaad waxyaabo gaar ah ku hoos yeelato suunkaaga si aad uga dhex muuqato dadka kale. Kuwani waa:
Aad ayey lagama maarmaan u tahay inaad ogtahay wax walba oo suurtagal ah (iyo inbadan) oo ku saabsan sawirada, sawirada, farsamooyinka, daaweynta, qaababka ... Marka la soo koobo, inaad yeelan karto aasaas farshaxan adag.
Dabcan, maskaxda ku hay taas, Markaan horay u soconno, waxaa jira farsamooyin cusub, qaabab cusub oo sawir oo aad adiguna baran doontid. Haddii kale, waxaad ku dambeyn doontaa inaad gabowdo oo kuwa cusub ayaa kaa soo daba mara.
Sidaa darteed, waa inaad ku guuleysataa dhammaan fikradahaas, ha ahaato qaab guud ama ku takhasusay 1-2, laakiin noqo kan ugu fiican.
Inaad haysato aqoontaas oo dhan macnaheedu maahan taas hal-abuurnimadu waa waxa runtii ka dhigaya xirfaddaada mid taagan. Wayna sameyn doontaa maxaa yeelay naqshadahaagu waxay noqon doonaan kuwa gaar ah, maxaa yeelay waxaad siisaa wax aysan dadka kale helin. Haddii aad fikradahaaga u beddeli karto farshaxanno macquul ah oo balwad leh oo aadan ka eegi karin sawirkaas, markaa waad guuleysan kartaa.
Doqon mayno. Si aad u guuleysato waa inaad is ogow taasna waxay ku lug leedahay shaqo badan hore u garaac albaabbada midig. Shabakadaha bulshada ayaa caawiya, wax badan. Taasi waa sababta waqti loogu qaato ka shaqeynta iyaga, ma aha oo kaliya in la laalo naqshadaha, laakiin sidoo kale in xiriir lala sameeyo shirkado laga yaabo inay xiiseynayaan.
Sida aad u bilaabi lahayd naftaada haddii aad aragto shaqo bixin, ama tusitaanka naqshadahaaga shirkadaha, baloogyada, iwm. Sidoo kale inaad abuurto wax aad dareemi karto inay xaddidan tahay, ama aad u malaynayso inaanu si fiican u rakibnayn. Inaad xadgudub tahay, si uun, way ku caawin kartaa inaad magac u yeelato naftaada, illaa inta aad ixtiraamayso xadka aan laga gudbi karin, dabcan.
Fikradda fanaaniinta farshaxanka
Kahor intaadan ka tegin mawduuca, waxaa habboon inaad la kulanto qaar ka mid ah fannaaniinta oo ah geedo run ah oo ku jira farshaxanka fikradda. Waxay yaqaanaan sida loogu xardho xirfad shaqadooda, qaarna meel fog ayey u socdaan. Halkan waxaan ku dhaafnay magacyadooda.
Wuxuu ku dhashay Buenos Aires, Argentina, waana khabiir ku takhasusay farshaxanka fikradda, laakiin sidoo kale sawirka. Shaqadiisu aad bay u fiicnayd oo wuu ka soo shaqeeyay shirkadaha sida Gameloft, Timegate, Sabarasa ...
Naqshadaha lagu ogaan karo inuu si aad ah loo isticmaalay, iyo inuu waliba aad ugu raaxeysanayo, waa kuwa leh steampunk, cyberpunk ama mowduuc post-apocalyptic.
Isidoro Valcárcel Madiina
Wuxuu ku dhashay Murcia, wuxuu hada ku nool yahay magaalada Madrid waana mid ka mid ah wakiilada ugu badan ee farshaxanka fikirka. Dhab ahaan, sanadkii 2015 wuxuu helay abaalmarinta Velázquez ee farshaxanka caaga ah.
Wuxuu ku dhashay Vitoria-Gasteiz, Álava, in kastoo hadda uu ku nool yahay Faransiiska. Waa fannaan, sawir-qaade, iwm. marka laga hadlayo xagga farshaxanka, waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican Spain.
Xaaladdan oo kale waxaan aadeynaa Kolombiya, halkaas oo Juan Pablo Roldán uu ku takhasusay khiyaaliga iyo farshaxanka fikradda qarniyadii dhexe. Ku dheji sida aan cidna u tusin sawirada masduulaaga iyo waxqabadka, Marar badanna, iyaga laftooda sawirradan ayaa ka buuxa tamar waxaadna ku arkaysaa xiisadda ka dhex jirta muuqaalladooda.
Marka laga hadlayo shaqadiisa, waxaan soo bandhigi karnaa Ciyaaraha Bluepoint, Justice League, Halo Wars, Destiny 2, ...
Waxaa jira farshaxanno fara badan oo badan. Noo sheeg haddii aad rabto inaad mid ku talisid. Ma kuu cadaatay waxa farshaxanimadu tahay?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Waa maxay art art